Siyaabo kale oo loo bixiyo - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Siyaabo kale oo la Bixiyo
Marka falalka fasalka la xalliyo ama la isku dayo, lacagta la soo celiyo marar badan lama awoodo in loo qaybiyo xubnaha fasalka. Cilmiga 'Cy Pres Doctrine' wuxuu u oggol yahay lacagtan in loo qaybiyo ururro samafal oo lagu kalsoon yahay 501c (3) sida Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado si ay u taageeraan shaqada si aan toos ahayn ugu faa'iideysa xubnaha fasalka.
Su'aalo ama ma xiiseyneysaa in loo qoondeeyo CIRC inay tahay abaalmarinta 'Cy Pres Award'? Kala xiriir Agaasimaha Horumarinta Marine Brichard at marine@coloradoimmigrant.org.
Dhaqaale Ururinta Dhalashada Facebook
Laba toddobaad ka hor dhalashadaada, waxaad arki doontaa farriin ka socota Facebook oo ku siinaysa ikhtiyaarka aad ku abuuri karto lacag ururin dhalashadaada soo socota. Asxaabtaada iyo qoyskaaga ayaa awoodi doona inay ugu deeqaan ururka aad dooratay!
Ma u baahan tahay tilmaamo ku saabsan sida loo doorto CIRC sida macaash doonka ah ee aad rabto inaad lacag ugu ururiso?
Tilmaamaha Maalgelinta Maalgelinta FB
Ololaha Wadajirka ah ee Wadajirka ah (CFC) waa kan ugu weyn uguna guulaha badan xagga shaqada ee sadaqada sadaqeynta adduunka. CFC waa hay'adda kaliya ee loo oggol yahay samafalka ee ka codsata shaqaalaha Federaalka goobahooda shaqo. CFC waxay u qaabaysan tahay taageerida iyo kor u qaadista sadaqada iyada oo loo marayo barnaamij iskaa wax u qabso ah oo kharash-ku-ool ah oo wax ku ool ah siinta dhammaan shaqaalaha Federaalka fursad ay ku saameeyaan danaha samafalka ee CFC ee ay doorteen.
Xeerka CFC: 50563
Saamiyada Bulshada ayaa ku xiraya Coloradans hay'adaha samafalka iyo sababaha ay aadka u daryeelaan. Ololeyaasha siinta goobta shaqada waxay fursad siinayaan shaqaalaha iyo hoggaanka shirkadda si ay uga wada shaqeeyaan wadashaqeyn sanadle ah si loo dhiirrigeliyo maalgashiga bulshada samafalka ah. Siinta ololeyaashu waa baashaal iyo dhisme kooxeed, oo mideeya shaqaalaha shirkadda ujeeddo guud laga leeyahay. Ku martiqaadida shaqaalaha inay wax ku bixiyaan tabarucaadka mushaharku waa faa iidada kordhinaysa saamaynta togan ee shirkaddu ku leedahay bulshada iyada oo la ixtiraamayo rabitaanka shaqsiyadeed ee ah inay muujiyaan naftooda iyagoo dooranaya dadka samafalayaasha ah ee samafalayaasha ah.